Searchdiggity Vulnerability Scanner | Myanmar Black Hacking
1 Searchdiggity Vulnerability Scanner
ကျွန်တော်တို့ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုကို pentest လုပ်တဲ့အခါ exploits တွေလိုချင်ရင်
Bing Diggity , Google Diggity လို hacking database
တွေမှာသွားရှာရတယ်၊ အခြား exploits တွေချပြတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ သွားရှာရပါတယ်၊
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးရဲ့ အားသားချက်ကတော့ ဆိုဒ်တစ်ခုရဲ့ အပြစ်အနာစာတွေ
သိချင်တဲ့အခါ အဲ့ဆိုဒ်ရဲ့လိပ်စာကို ထည့်ပြီး ရှာလိုက်ရုံနဲ့exploit တွေချပေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေအကုန်လုံးမှာ
ရှာပေးပြီး result တွေထုတ်ပေးပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး
ထွက်လာတဲ့ result တွေဟလည်း မှန်ကန်မှု့ ရှိတဲ့အတွက်
အရမ်းကောင်းတဲ့ security tool တစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်
exploit တွေရှာပေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေကတော့
GoogleDiggity, BingDiggity, Bing LinkFromDomainDiggity, CodeSearchDiggity, DLPDiggity, FlashDiggity, MalwareDiggity, PortScanDiggity, SHODANDiggity, BingBinaryMalwareSearch, and NotInMyBackYard Diggity တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်၊
Ref - http://www.kyawzinhein.net/
Labels: Other Tools . PC Software . Scanner Tools
Oct 29, 2017, 9:49:00 AM